Nepal Tube Australia – जाेड्दैछाै अष्ट्रेलियाका नेपाली
काठमाडौं उपत्यकामा हैजाको प्रकोप, अहिलेसम्म १४ जनामा पुष्टि !
अष्ट्रेलिया मै फेरिदै बोनम्यारो
नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आगामी सेप्टेम्बरमा अस्ट्रेलिया भ्रमणमा आउँदै !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा हैजाका बिरामीको सङ्ख्या बढेसँगै कतै प्रकोपको रुप लिन लागेको त छैन भन्ने चिन्ता बढेको छ । बुधबार मात्रै पनि थप दुई जनामा हैजा पुष्टि भएको हो। असार २ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म काठमाडौंमा १४ जनामा हैजाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारि दिएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सङ्गीता मिश्राले हैजा […]
ब्रिजबेन,काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आगामी सेप्टेम्बरमा अस्ट्रेलिया भ्रमणमा आउने भएको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) र रोयल हेरिटेज अस्ट्रेलियाबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपाली टोलीले अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्न लागेको हो । केही साता अघि भएको क्यान र रोयलबीचको सम्झौतामा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई हरेक वर्ष १० दिनको अस्ट्रेलिया भ्रमण गराइने उल्लेख थियो । नेपाली […]
रवि लामिछाने घोषणा गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अब कसरी बढ्ला राजनीति ?
काठमाडौं । सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच लामिछानेले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको चुनाव प्रत्यक्ष हुनु पर्ने मागसहित नयाँ पार्टी घोषणा गरिएको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरुलाई आफ्नो दलमा आउन समेत लामिछानेले आह्वान गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेकाहरुप्रति आफ्नो सम्मान रह‍ेको भन्दै […]
चर्चित पत्रकार लामिछानेले आज नयाँ अभियानसँगै उम्मेदवारी घोषणा गर्दै !
काठमाडौं । चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले आज नयाँ राजनीतिक अभियानसँगै उमेद्वारी घोषणा गर्दैहुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभागृहमा हुने कार्यक्रममा लामिछानेले औपचारिक रुपमा उमेद्वारी घोषणा गर्न लाग्नुभएको हो । ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट राजीनामा दिनुभएका लामिछानेले आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनावमा काठमाडौंबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा चलेपनि औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । स्वतन्त्र लड्ने वा कुनै पार्टीबाट भन्ने अहिलेसम्म नखुलाएपनि […]
काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेन साह (स्वतन्त्र) र उपमेयरमा सुनिता डंगोल (एमाले) विजयी
काठमाडौं । देशकै जेठो काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह ९बालेन० निर्वाचित भएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार साह ६१ हजार ७६७ मत ल्याउँदै काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित बन्दा साहका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३४१ मत ल्याउनुभयो । तेस्रो बन्नुभएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ३८ हजार ११७ मत ल्याउनुभएको छ । […]
अष्ट्रेलियाव्यापी नेपाली टेनिस प्रतियोगिता ब्रिजवेनमा सम्पन्न, मेलबर्न भयो हाबी
अब वर्षमा कम्तिमा १० दिन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई अस्ट्रेलिया भ्रमणको अवशर !
जुन १८ र १९ मा ब्रिजबेनमा टेनिस च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदै !
धनी बन्ने लोभले रोगी बन्दैछौँ हामी, स्वच्छ खानपानसँगै ब्यायाम र मनोरञ्जनको यस्तो छ महत्व !
अष्ट्रेलियामा कत्ति नेपालीलाई कोभिड लाग्यो होला ?
सिड्नीमा साथीको गलफ्रेण्डलाई मन पराउदा (पुरानो डायरीबाट)
यी कुरा बुझेर मात्रै अष्ट्रेलिया पढ्न आउनु होला
ब्रिजवेनमा नेपाली सामुदायिक केन्द्र बन्ने संभावना बढ्दै, ६ महिनाभित्र जग्गा किन्ने पलायो आशा
ब्रिजबेन । केविसी अष्ट्रेलियाको आयोजनामा आगामी जुलाई २२ तारिखदेखि अगष्टको ७ तारिखसम्म अष्ट्रेलियाका विभिन्न ७ शहरहरुमा धमाका २०७९ आयोजना हुनेभएको छ । तीजको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको तीज धमाका २०७९ अष्ट्रेलियाको पर्थ, तास्मानियाको लन्चेष्टन, मेलबर्न, ब्रिसबेन, सिड्नी, राजधानी क्यानबेरा र एडिलेडमा सञ्चालन हुन लागेको हो । केविसी अष्ट्रेलियाले स्थानीय नेपाली सामूदायिक संघसंस्था र ईभेन्ट अर्गनाईजरहरुसँगको सहकार्यमा […]
कमल हसनको नयाँ फिल्म ‘विक्रम’ को कमाई ४०० करोड नजिक !
एजेन्सी, काठमाडौं। चर्चित दक्षिण भारतीय अभिनेता कमल हसनको नयाँ फिल्म ‘विक्रम’ ले विश्वव्यापी रुपमा ३५० करोड व्यापारको रेकर्ड बनाएको छ । लोकेश कनागराजले निर्देशित गरेको यो फिल्मले विश्वव्यापी रूपमा ३५० करोडको व्यापार पुरा गरेर ४०० करोडको व्यापारतर्फ अघि बढिरहेको पाइएको हो । मे २९ मा रिलिज भएको यो फिल्मले बक्स अफिसमा अत्यधिक राम्रो कमाई गरिरहेको […]
आज नयाँ मिस नेपाल छानिदै, २४ मध्ये कुन सुन्दरीले जित्लान ताज ?
काठमाडौं । आज नयाँ मिस नेपालको भाग्य फैसला हुँदैछ । बेलुका ललितपुरमा हुने ग्रान्ड फिनालेमार्फत २४ जना सुन्दरीबाट नयाँ मिस नेपाल छान्न लागिएको हो । द हिडन ट्रेजरले मिस नेपाल प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको भएपनि कोरोना महामारीको कारण अघिल्ला दुई वर्ष प्रतियोगिता रोकिएको थियो । यसपटक भौतिकरुपमै आयोजना हुन लागेको ग्रान्ड फिनालेलाई भव्य रुपमा सम्पन्न […]
राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान अष्ट्रेलिया शाखाको दोश्रो महाधिवेशन जुन २५ मा हुँदै !
ब्रिजबेन । राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान अष्ट्रेलिया शाखाले आगामी जुन २५ मा आफ्नो दोश्रो महाधिवेशन गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठान अष्ट्रेलिया शाखाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिड्नीको टेम्पो पार्कमा जुन २५ मा महाधिवेशन गर्ने जानकारी गराएको हो । नेपाली गीतसंगीत, कलासंस्कृत, भेषभुसा तथा रितिरिवाजको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको संस्थाको अष्ट्रेलिया शाखाको पहिलो ३ बर्षे […]
अष्ट्रेलियाका १६ देखी ८५ वर्ष उमेर समूहका १५ प्रतिशत नागरिक गम्भिर मानसिक समस्यामा !
बालबालिकामा मोबाइल र टिभीको लत आगुऔषधभन्दा घातक !
अष्ट्रेलियामा पहिलो घर किन्नेहरुलाई सघाउन, नेपालट्युबले सुरु गर्दै माइ फष्ट होम शो । यस्तो बन्यो प्रोमो
सिड्नीको आधा दर्जन सरकारी विद्यालयमा पढाइन्छ नेपाली भाषा र संस्कृति